एसिएन ग्रामीण पर्यटन महोत्सवमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री गोले आउने « Loktantrapost
एसिएन ग्रामीण पर्यटन महोत्सवमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री गोले आउने
३ माघ २०७६, शुक्रबार १०:२१
झापा । काँकरभिट्टामा हुने एसियन ग्रामीण पर्यटन महोत्सवमा भारत सिक्किमका मुख्यमन्त्री पि.एस. गोले आउने भएका छन् ।
आयोजकले बुधवार गोलेलाई भेटेर निम्तो दिए पछि उनले आफु आउन इच्छुक रहेको बताएका हुन् । महोत्सवको छैठौं संस्करण यहि माघ २६ गतेदेखि काँकरभिट्टामा आयोजना हुने भएको छ । सन् २०१२ बाट सुरु भएको महोत्सवको पाच वटा संस्करण बाहुण्डागीमा सम्पन्न भएको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई समेत ध्यानमा राख्दै काँकरभिट्टामा आयोजना हुने भएको छ । महोत्सव पहिलो पटक बाहुण्डागी बाहिर हुन लागको आयोजकले बताएको छ ।
यहि माघ २६ देखि ३० गतेसम्म काँकरभिट्टाको देवकोटा पार्क र आसपासको बजार क्षेत्रलाईलाई महोत्सव क्षेत्रका रुपमा रहने गरी आयोजना हुने महोत्सवका आयोजनक समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले बताए ।
कार्कीका अनुसार यस पटकको महोत्सव मौलिक हुनेछ । नेपालले पर्यटन वर्षका रुपमा सन् २०२० लाई घोषणा गरेको अवस्थामा महोत्सवको महत्व र व्यपाकताका लागि स्थान परिवर्तन भएको आयोजकले बताएको छ । ‘पर्यटन वर्षलाई समेत लक्षित गरेर आयोजना गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावका आधारमा काँकरभिट्टामा गर्न लागेका हौं ।’ अध्यक्ष कार्कीले भने–‘यसपटक महोत्वसलाई सधैं भन्दा फरक र प्रभावकारी बनाउने छौं ।’
महोत्सवमा नेपाल भारत, भुटान, बंगालदेश, लगायतका ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ । महोत्वसको तयारीका लागि ५१ सदस्यीय मुल आयोजक समिति समेत गठन भएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
महोत्सवमा भारत सिक्किमका मुख्यमन्त्री पि.एस. गोले अतिथिका रुपमा आउने भएका छन् । महोत्सव आयोजक समितिको एक प्रतिनिधि मण्डलले बुधवार सिक्किमको जोरथाङमा मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरी महोत्सवको निम्तो दिएको थियो । उनलाई निम्तो स्वरुप भिजिट नेपालको जागरण अभियानको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई भिजिट नेपालको लोगो अंकित टिसर्ट र व्याज हस्तान्तरण गरिएको थियो । भिजिट नेपाल मेचीनगरक जागरण अभियानका टोली नेता डिल्लीराम घिमिरेका अनुसार उनले आफू महोत्सवमा पक्का आउने बताएका छन् ।